Ifulethi eline-sauna, indawo yokubhukuda nobhavu oshisayo - I-Airbnb
Ifulethi eline-sauna, indawo yokubhukuda nobhavu oshisayo
Ifulethi elisha elisha elihle elitholakala eRhenen, elinombono wamapulazi, indawo yokubhukuda kanye nechibi. Ifulethi linendawo ethokomele, yesimanje yasemakhaya. Ungafinyelela ekhishini langaphandle kanye ne-BBQ. Kukhona nokufinyelela mahhala echibini lokubhukuda elishisayo, i-sauna kanye nobhavu oshisayo. Lezi zabelwe namanye ama-B&B amabili. Ifulethi linethala layo, elibuka inkundla enedamu lokubhukuda. Kukhona imibhede yelanga eyanele wonke umuntu.
- I-swimming pool ayishisi ebusika
ubusuku obungu-7 e- Rhenen
Kukhona ichibi elikhulu kule ndawo, lapho ungajabulela khona ukudoba. Kukhona nezilwane ezimbalwa ezifuywayo ezizulazula ezimfeni, ezihlanganisa imbongolo, amaponi kanye nezingulube ezincane. Kunezindawo ezimbalwa zokujabulela imvelo ngaphandle. Ubhavu oshisayo unombono omuhle phezu kwechibi.
Imvelo kanye nemvelo
Kunezindlela ezimbalwa zokuhamba izintaba endaweni eseduze nefulethi. Umzila we-clog uhamba eduze kwesayithi futhi phakathi nebanga lokuhamba ngebhayisikili kukhona indawo yokuzijabulisa yosuku i-Kintelooijen, i-De Grebbeberg kanye nesiqiwi semvelo i-De Blauwe Kamer. I-Kintelooijen yinhle kakhulu ekuhambeni, ngebhayisikili futhi inemizila embalwa yamabhayisikili asezintabeni. IGrebbeberg iyintaba ephakeme ngamamitha angama-52, ekugcineni kwe-Utrechtse Heuvelrug. Indawo yokulondoloza imvelo iDe Blauwe Kamer yinhle kakhulu ekuhambeni okude futhi ungathatha ukuvakasha kwemvelo. Amahhashi asendle nezilwane zasezintabeni angabonakala futhi athathwe izithombe kule ndawo! Kukhona futhi izinyoni eziningana ezizalanisa minyaka yonke ezindaweni ezihlala njalo endaweni, kukhona indlu yokubuka ikakhulukazi ukubona nokuthwebula izilwane zasendle, okuhle kakhulu kumthandi wemvelo! Kunesuphamakethe enkulu kanye nesitobhi sebhasi phakathi nebanga lokuhamba efulethini. Kunesitolo sokubhaka esihle edolobhaneni lase-Achterberg. I-Ouwehands Zoo itholakala kalula ngebhayisikili.